Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 22)
Faahfaahinta koowaad ee ku saabsan Google Pixel Watch
Google Pixel Watch: Faahfaahinta ugu horreysa iyo taariikhda la sii deynayo. Raadi wax badan oo ku saabsan Google's Wear OS smartwatch ee soo socda deyrtan.
Amazon waxay ku dhawaaqeysaa kiniin cusub Fire HD 10 Kids Edition iyo "Show Mode" oo loogu talagalay Dabka caadiga ah
Iyada oo la adeegsanayo "Muuqaalka muuqaalka" waxaad u rogi kartaa dabkiiagii hore ee Amazon Fire inuu noqdo Echo Show oo leh Alexa oo ah halyeeyada ugu weyn. The Amazon Fire HD 10 Edition Edition lama waayo.
HiGame: PC-ga ugu awoodda badan ee loogu talagalay cayaartoyda suuqa ku jirta
Chuwi HiGame: Kaydso kumbuyuutarka ugu awoodda badan ee loo yaqaan 'PC'. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan kombiyuutarkan yar ee ku habboon ciyaarista ama soosaarida waxyaabaha ku mahadsan awoodiisa.
Snapdragon Wear 2500: processor-ka loogu talagalay smartwatch-ka carruurta. Qualcomm ayaa ku sharraxaysa saacadaha ugu yar guriga.
EMEET Xafiiska Dib u Eegista 2
EMEET Office Core 2 Smart Speaker wuxuu bixiyaa khibrad dhagaysi tayo leh, naqshad gaar ah iyo ismaamul weyn
Qeexitaannada iyo Astaamaha New iBall Imprint 4G Tablet
iBall, oo ah shirkad aqoon yar ku leh suuqa qalabka adduunka, ayaa soo saartay iBall Imprint 4G, kiniinkeeda cusub oo la imanaya naqshad iBall ayaa soo saartay kiniinkeedii ugu dambeeyay ... Waxaan ka hadlaynaa iBall Imprint 4G, aalad leh a naqshad iyo qaar ka mid ah muuqaalada quruxsan qabow.
Soo dejiso waraaqaha sawirada ee cusub ee 'Oppo Find X'
Maqaalkan waxaan ku tuseynaa dhammaan sawir-gacmeedka cusub ee Oppo Find X
Hordhaca Android P Developer 3 hadda waxaa loo heli karaa Nokia 7 Plus
Nokia 7 Plus, hadda waad rakibi kartaa beta-ka labaad ee Horudhaca Horumariyaha 'Android P'
Google Home, Home Mini iyo Google WiFi ayaa si rasmi ah u yimid Spain
Hoyga Google, Home Mini iyo Google WiFi oo horeyba loogu iibinayay Spain. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka ku hadla ku hadla astaamaha.
Dib u eegista MyGica ATV1960: Awooddu waxay ku jirtaa amarkaaga !!
Russia 2018. Kani waa smartwatch garsoorayaasha ay maamusho Wear OS
FIFA waxay ku aamintey shirkada Switzerland ee Hublot inay maamusho ogeysiinta VAR
Dib u eegis YI-Cloud Dome Camera 1080P
La kulan YI-Cloud Dome Camera 1080P, kamarad wifi oo leh xallinta HD oo dhan oo aad ka maamuli karto taleefankaaga casriga ah iyo koronto badan oo aad qiyaasi karto
Vimble 2, oo tayo sare leh, kuna dhow Gimbal kaliya for 99
Vimble 2, oo ah xirfadle xirfadlayaal ah oo Gimbal ah oo hadda adiga kuu noqon kara kaliya 99 euro adoo isticmaalaya kuuboon dhimista gaarka ah ee Androidsis
Chuwi LapBook Hawada
Chuwi LapBook Air 2018, laptop oo wata naqshad qurux badan oo loo raacay Macbook Air oo leh aluminium anodized ah iyo jir aad u khafiif ah.
Dib u eeg SANDUUQA TV ABOX A4
Video Review TV BOX ee nooca ABOX model A4 oo leh 2 Gb oo RAM ah iyo 16 Gb oo ah kaydinta gudaha ah oo ah qiime fadeexad.
Huawei wuxuu u oggolaan doonaa qaar ka mid ah noocyadeeda inay ku shaqeeyaan Windows 10 iyada oo loo marayo daruuraha
Shirkadda Aasiya ee Huawei ayaa soo bandhigtay adeeg cusub oo kuu oggolaanaya inaad ku socodsiiso nooc buuxa oo ah Windows 10 daruurta dhexdeeda.
Dib-u-eegista fiidiyowga oo lagu daray sawir Tamarta SANDUUQA 5 + YALL Edition
%% Dib u eegis fiidiyow ah oo dhameystiran oo lagu daray aflagaadada afhayeenka cusub ee tamarta 'Sistem Bluetooth', Tamarta Muusikada SANDUUQ 5 + YALL Edition%
Hoyga Google wuxuu horeyba ugu hadlaa Isbaanishka si rasmi ah
Google Home iyo Home Mini waxay horey ugu hadlaan Isbaanish. Kuwa caqliga badan ee ku hadla astaanta ayaa awalba awood u leh inay ku hadlaan oo fahmaan Isbaanishka.
Taleefanka Asus ROG waxaa laga yaabaa inuu la yimid 10GB xusuusta
Terminal-ka cusub ee 'Asus' ee loo yaqaan 'gamers', ROG Phone, wuxuu ku sigtay inuu suuqa ku dhufto 10 GB oo RAM ah, laakiin ugu dambeyn wuxuu sii joogay 8 GB
Wear OS ma maamuli doono Samsung Gear S4 ee soo socota
Shirkadda Aasiyaanka ah ee Samsung ugu dambayntii ma isticmaali doonto Android Wear oo ah nidaamka hawlgalka ee smartwatch-keeda soo socda, Samsung Gear S4
Sawirada rasmiga ah ee BlackBery KEY2 waa la dusiyay
Maalin ka hor inta aan si rasmi ah loo soo bandhigin BlackBerry KEY2, Evan Blass wuxuu mas'uul ka ahaa shaandheynta dhammaan tilmaamaha iyo sawirrada boosteejadan cusub ee BlackBerry.
Riley Touchscreen Smartwatch: Saacadda cusub ee Wear OS
Riley Touchscreen Smartwatch Marc Jacobs 'oo wata Wear OS. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan smartwatch-ka cusub ee ku dhuftey suuqa adeegsanaya nooca cusub ee nidaamka hawlgalka.
Aermoo V1 waa codka ugu fiican ee la qaadi karo «biyuhu ma galaan»
Aermoo V1 wuxuu noqon karaa wehelka fasaxa xagaaga ee aad raadineyso, kuhadalka bluetooth-ga ee bixiya awood, cod aad uqurux badan iyo ismaamul weyn, oo waliba leh shahaado IPX6
Daah-furka iyo aragtiyaha ugu horreeya ee MyGica ATV1960, oo ah BOX TV-ga ugu sarreeya ee u muuqda mid aad iyo aad u wanaagsan
Daahfurka iyo dareenka ugu horreeya ee MyGica ATV1960, oo ah BOX TV-ga ugu sarreeya ee leh astaamo farsamo sare iyo kontorool fog oo si macno leh maskaxdaada u qarxin doona.
Asus VivoWatch BP: Smartwatch-ka cusub ee cabbiraya cadaadiska dhiiggaaga
Asus VivoWatch BP: Smartwatch-ka cabiraya caafimaadka isticmaalaha. Waxbadan ka ogow saacadda cusub ee Asus, oo shirkaddu ku soo bandhigtay dhacdo ka dhacday Taiwan.
Maqnaanshaha qaybta kiniiniyada ee Google Store waxay ahayd cilad
Laba maalmood ka dib markii la waayey, Google ayaa mar kale soo bandhigtay qaybta kiniinnada, iyagoo sheegaya in la waayey khalad kombuyuutar ah.
Google waxay ka saareysaa qaybta kiniiniyada boggeeda rasmiga ah
Mar labaad, Raadiyaha weyn wuxuu mar kale cadeynayaa in kiniiniyada Android aysan ahayn suuq iyaga xiiseynaya
iVoomi i2: dhamaadka-dhamaadka-cusub ee ay bilawday shirkadda Shiinaha
La kulan iVoomi i2, oo ah mobiil hoose oo dhawaanahan laga soo daabulay dalka Hindiya oo leh qiime dhaqaale, oo aan ka hadli doonno xiga. Intaas waxaa sii dheer, waxaan dib u eegi doonnaa dhammaan astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee qalabkani ku yimaado. Sii wad akhriska!
Meizu M6T waa rasmi. Ogow dhammaan astaamaheeda iyo qeexitaankiisa farsamo!
Meizu M6T waa durbaba waa la joogaa, waana taas kadib dhowr toddobaad oo xan iyo mala awaal ah oo hareeyay qalabkan cusub oo aan horay u ogaanay dhammaan sifooyinkiisa, shirkadda Shiinaha ayaa si rasmi ah uga dhigtay qaab muuqaal leh xoogaa damiir leh, laakiin soo jeedinno xiiso leh . Waan kuu soo bandhigeynaa!
Nooca 256GB ee OnePlus 6 ayaa laga iibiyay dalal dhowr ah
The OnePlus 6 oo leh 256 GB oo keyd ah ayaa laga iibiyay dalal dhowr ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan guusha uu noocan taleefanka u haayo adduunka oo dhan.
OnePlus waxay ka noqotaa shaqada Had iyo jeer Muujinta sababo la xiriira isticmaalka batteriga oo sareeya
Shirkadda Aasiya waxay ku xaqiijisay adeeggeeda taageerada farsamo inay dib uga laabatay shaqadii AOD sababo la xiriira isticmaalka batteriga xad-dhaafka ah.
Samsung waxay sii deyneysaa cusbooneysiinta amniga ee Galaxy Note 8
Shirkadda Kuuriyaanka ah ee Samsung ayaa dhowaan sii deysay, adduunka oo dhan, cusbooneysiinta amniga ee May 2018 ee Galaxy Note 8
Lenovo Z5 waxaa la soo bandhigi doonaa 5-ta Juun
Lenovo Z5: Taariikhda soo bandhigida ayaa la xaqiijiyay Juun 5. Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda la bilaabayo taleefanka cusub ee shirkadda, kaas oo ballan qaadaya inuu madax u rogi doono iyada oo qaabkeedu yahay shaashadda oo dhan.
Sifeeyay qiimaha Xiaomi Mi Band 3
Qiimaha Xiaomi Mi Band 3 mar horaba waa la dusiyay.Faahfaahin intaa ka badan ka ogow qiimaha jijimadda sumcadda Shiinaha ay yeelan doonto markay suuqa ku dhacdo.
Ciyaar Sharaf: Casriga casriga ah ee ciyaaraha ayaa la soo bandhigi doonaa 5-ta Juun
Ciyaar Sharaf: Telefoonka casriga ah ee ciyaaraha ayaa imaan doona 5-ta Juun. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub nooca Shiinaha oo sidoo kale galaya suuqyada casriga ah ee ciyaaraha.
Dib u eeg Bluboo D5 PRO, niyad jab weyn !!
Halkan waxaan kaaga tagi doonaa dib u eegista fiidiyowga oo dhameystiran ee Bluboo D5 PRO, dib u eegista fiidiyowga iyo ra'yiga adiga oo aan yareynin carrabka aan kuu sheegayno dhammaan wanaagga iyo wax kasta oo xun ee ku saabsan heerkan gelitaanka ee heer Android ah.
Samsung Galaxy S9 Mini ayaa ku daatay fiidiyoow
Fiidiyow ayaa daadanaya naqshadda Galaxy S9 Mini. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee Samsung, kaas oo la filayo inuu suuqa soo galo sanadkan.
Google Home iyo Home Mini ayaa maalmahaan imaan doona Spain
Hoyga Google iyo Home Mini waxaa horey looga iibsan karaa Spain. Ka ogow wax badan oo ku saabsan daah-furka kuwa ku hadla astaamaha ee dalkeenna.
Qeexitaannada xaddidan ee Sharafta 9i, shirkadda dhexdhexaadka ah ee soo socota
Honor 9i ee la cusbooneysiiyay wali ma imaan. Dhawaan TENAA, Honor LLD-AL20 iyo taleefannada LLD-AL30 - magacyada muhiimka ah. Waxay ku dhex dureen kaydka xogta ee bogga iyaga oo aan lahayn faa'iidooyin aan la tixgelin karin oo shaki la'aan soo jiita dareenka. Qalabkan waxaa lagu sii daayay bogga laba nooc.
Xiaomi Redmi 6 Pro: qeexitaannada iyo astaamaha sirta ah ee mobilada soo socda ee shirkadda
Xiaomi mar labaad ayaa isha lagu hayaa. Waqtigan, waxay umuuqataa in shirkada weyn ee Aasiya leedahay ay diyaar noo tahay Xiaomi Redmi 6 Pro Mobiilkan ayaa hada lagu shubay TENAA oo ay weheliso naqshad dhismeedka hore, iyo qeexitaano kale oo aad u xiiso badan.
Huawei raaxayso 8e: dhamaadka-hoose ee cusub ee shirkadda leh Android 8.1 Oreo
Huawei wuxuu noo keenayaa Huawei Enjoy 8e, oo ah taleefan casri ah oo heer hoose ah oo ka yimid Aasiya oo leh nooca ugu dambeeya ee Android OS. Moobaylkani wuxuu la yimaadaa sifooyin damiir leh, taas oo joogitaanka guddi qaab raaxo leh oo caato ah 18: 9 aan ku qanacsanahay wax badan u taagan.
Cusboonaysiinta ugu horreysa ee OnePlus 6 ayaa meesha ka saareysa shaqeynta Had iyo jeer On Display (AOD)
Shaqada Had iyo jeer On Display ee ka timid gacanta OnePlus 6, ayaa hadda laga waayey aaladda kadib cusbooneysiintii ugu dambeysay ee terminal-ka, oo ah cusbooneysiin cusub oo na siineysa sheeko cusub.
Xiaomi Mi 8: Sawirro qarsoodi ah oo naqshadeeda ah, sanduuqa iyo animojis ayaa la xaqiijiyay
Xiaomi Mi 8: Naqshadeynta, sanduuqa iyo animojis ayaa xaday ka hor intaan la bilaabin. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha oo xog badan horay loo sii daayay kahor imaatinkeeda suuqa.
Sawirro cusub oo ah Moto Z3 Play ayaa xaday
Shaandheeyay laba sawir oo cusub oo ah Motorola Moto Z3 Play. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee ugu sarreeya, oo sawirradiisii ​​ugu horreeyay mar hore la helay.
Xiaomi Mi Band 3 ayaa la soo bandhigi doonaa 31-ka Maajo
Xaqiijiyay: Xiaomi wuxuu soo bandhigi doonaa Xiaomi Mi Band 3 Maajo 31. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan munaasabadda soo bandhigida ee sumadda Shiinaha oo aan ku sugi karno soo bandhigida jijinkaaga.
Galaxy Note 9 wuxuu la imaan doonaa Exynos 9810 sida uu sheegayo Geekbench
Samsung Galaxy Note 9 ayaa ka gudbay tijaabooyinka Geekbench, waxaana la xaqiijiyay in ay maamuli doonaan Exynos 9810, isla processor-ka aan ka helno Galaxy S9.
Xiaomi Mi 8 wuxuu noqon doonaa taleefankii ugu horreeyay ee GPS leh laba jeer oo isdaba joog ah
Xiaomi ee soo socota ee soo socota, Mi 8, wuxuu noqon doonaa terminal-ka ugu horreeya adduunka ee lagu gaaro suuqa iyadoo la adeegsanayo laba-jibbaar GPS, GPS chip 16 jeer ka saxsan kan caadiga ah.
OnePlus 3 iyo OnePlus 3T horeyba waxay u leeyihiin aqoonsi wajiga kadib cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Oxygen
Sida uu ballan qaaday madaxa OnePlus, 5 bilood ka hor, ictiraafku wuxuu iman doonaa OnePlus 3 iyo One Plus 3T. Nidaamkan ayaa horeyba loo heli karaa.